DBF Mmezi Ngwá Ọrụ. DBF Iweghachite Software. DBF Idozi Ngwá Ọrụ.
DataNumen DBF Repair bụ kasị mma DBF mgbake ngwá ọrụ n'ụwa. Ọ nwere ike ịrụzi ndị rụrụ arụ DBF nchekwa data faịlụ ma weghachite data gị dị ka o kwere mee, si otú ahụ na-ebelata ọnwụ na nrụrụ faịlụ.
4.90 / 5 (site na 1,644 votes)
Gịnị mere DataNumen DBF Repair?
Onye Nduputa Mmepụta
Main Akụkụ na DataNumen DBF Repair v2.9
Kwado nsụgharị niile nke DBF nchekwa data, tinyere dBASE III, dBASE IV, dBASE 5 maka dos, dBASE 5 maka Windows, FoxBase, FoxPro, Visual FoxPro, wdg.
Nkwado ịrụzi DBF Faịlụ nwere Mem ma ọ bụ ọnụọgụ abụọ data ubi echekwara na DBT ma ọ bụ FPT faịlụ.
Nkwado kewaa DBF faịlụ mgbe nha ya ruru oke akọwapụtara, ọkachasị, nkwado iji kewaa 2GB buru ibu DBF faịlụ.
Nkwado kewaa okpokoro mgbe ọnụ ọgụgụ ya rutere na ọnụ ọgụgụ kachasị akara akara.
Nkwado idozi DBF faịlụ dị na mgbasa ozi rụrụ arụ, dị ka diski diski, Zip diski, CDROM, wdg.
Nkwado ịrụzi otu ogbe DBF faịlụ.
Nkwado ịchọta ma họrọ DBF faịlụ a ga-arụzi na kọmputa mpaghara.
Nkwado mwekota na Windows Explorer, yabụ ị nwere ike ịrụzi DBF faịlụ na onodu menu nke Windows Explorer mfe.
iji DataNumen DBF Repair iji weghachite mebiri emebi DBF Databases
Mgbe dBase gị, FoxBase, FoxPro na Visual FoxPro ọdụ data (.dbf faịlụ) mebiri emebi ma ọ bụ mebie ma ị nweghị ike imeghe ha n’usoro, ịnwere ike iji ya DataNumen DBF Repair i scanomi ihe dbf faịlụ na-agbake data site na faịlụ dị ka o kwere mee.
Cheta na: Tupu na-agbake ọ bụla mebiri emebi ma ọ bụ rụrụ arụ dbf faịlụ na DataNumen DBF Repair, biko mechie ngwa ndị ọzọ nwere ike gbanwee ya dbf faịlụ.
Họrọ ndị mebiri emebi ma ọ bụ ndị rụrụ arụ dbf faịlụ a ga-arụzi:
Nwere ike itinye ihe na dbf filename ozugbo ma ọ bụ pịa
bọtịnụ chọta dbf faịlụ a ga-arụzi na kọmputa mpaghara.
Na ngwakọta igbe
, ị nwekwara ike ịhọrọ usoro nke isi mmalite dbf faịlụ. Ugbu a a na-akwado usoro ndị a:
Ihe ngosi FoxPro 2.0
Ihe ngosi FoxPro 2.5
Ihe ngosi FoxPro 2.6
Site na ndabara, a na-ahazi usoro ahụ na "Nchọpụta Nchekwa onwe" nke mere na DataNumen DBF Repair ga-achọpụta usoro nke isi iyi dbf faịlụ ma mepụta ihe edozi dị ka usoro achọpụtara. Agbanyeghị, ọ bụrụ na enweghị ike imeghe faịlụ mmepụta ihe nke ọma site na ngwa gị, mgbe ahụ ị nwere ike ịkọwapụta usoro ịmanye DataNumen DBF Repair n'ịwa faịlụ na usoro nke dakọtara na ngwa gị.
Site na ndabara, DataNumen DBF Repair ga-azọpụta ofu dbf nchekwa data n'ime faịlụ ọhụrụ aha ya bụ xxxx_fixed.dbf, ebe xxxx bu aha isi mmalite dbf faịlụ. Dịka ọmụmaatụ, maka isi mmalite dbf faịlụ mebiri emebi.dbf, aha ndabara maka faịlụ edozi ga-emebi emebi_fixed.dbf. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ iji aha ọzọ, biko pịa ma ọ bụ tọọ ya dịka:
bọtịnụ, na DataNumen DBF Repair ga start na-enyocha ma na-arụzi isi iyi ahụ dbf faịlụ. Ogwe ọganihu
Mgbe mmezi usoro, ọ bụrụ na isi iyi dbf nchekwa data nwere ike idozi nke ọma, ị ga-ahụ igbe ozi dị ka nke a:
Ugbu a, i nwere ike imeghe ofu dbf faịlụ na ngwa kwekọrọ.
DataNumen DBF Repair 2.4 weputara na Disemba 23th, 2020
DataNumen DBF Repair A na-ahapụ 2.2 na November 6th, 2020
DataNumen DBF Repair A na-ahapụ 2.1 na November 10th, 2019
DataNumen DBF Repair A tọhapụrụ 2.0 na August 24, 2013
DataNumen DBF Repair 1.6 weputara na March 24th, 2008
Nkwado kewaa DBF faịlụ mgbe nha ya ruru oke predefined.
DataNumen DBF Repair A na-ahapụ 1.5 na July 12th, 2006
Tinye njikwa ndị ọzọ na DBT / FPT faịlụ mgbake.
DataNumen DBF Repair A tọhapụrụ 1.4 na Disemba 5, 2005
Melite usoro mkpesa njehie.
Nkwado iji weghachite ubi ọnụọgụ abụọ.
Mmezi Microsoft mebiri emebi SQL Server Ebe nchekwa data MDF.